War saxaafadeed ( Faafin Degdeg ah ) – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
War saxaafadeed ( Faafin Degdeg ah )
Tr. January 16,2016
▪ War saxaafadeed –
Waxa aanu xasuusaneynaa geesinimada , waajib gudashada iyo nafhurnimada ciidamada ku howlgala magaca AMISOM iyo ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya , kuwaa oo nafhurnimada iyo dadaalka ay wadaagaan ku xaqiijiyay markale horumar dhinacyo badan leh .
Waxa aanu tacsi u direynaa qoysaska , saaxiibada iyo dadka jecel ciidamadaasi geesiyaasha ah ee naftooda u waayay ilaalinta muwaadiniinteena rayidka ah ee aan waxba galabsan, xoojinta hey’adaha dowladeed iyo ilaalinta guusheena ka dhanka ah sharta oo ah argagaxisada . ma iloobi doonno nafhurnimadooda,mana noqon doonto wax cayaar gala .
Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya marna kama gaabin doonto, mana hakin doonto ka guul gaaridda yididiiladeeda nabadda ,horumarka iyo barwaaqada guud ahaan shacabkeeda iyo gebi ahaan gobolka , falalka fuleynimada leh ee dembiga xambaarsan ee ay geysanayaan kuwa isku qarinaya tafsiir khaldan oo ay ka bixinayaan diinteena islaamka ee quruxda badan.
Iyadoo lagu gudajiro dadaalada geesinimo ee si mideysan uga socda Ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ( AMISOM) iyo Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya , ayaa waxaa xaqiijin doonaa in nafhurnimada maanta ee wiilasha iyo gabdhaha walaalaheena aan wax ka soo qaad micno laheyn noqon doonin marnaba. Waanu jebin doonnaa Al Shabaab , Soomaaliya iyo guud ahaan gobolkuna waxa ay noqon doonaan kuwa bedqab ah oo barwaaqo u ah dhammaan shacabkeena walaalaha ah.
Dhacdooyinka murugada ah ee caalamka xilligan ka dhacay oo ay ka mid yihiin Paris, Istanbul, Jakarta iyo Ougadugo, waxaanu ognahay in argagaxisadu tahay dhibaatada dunida maanta hortaagan. waxaa waajib nagu ah inaan jebinno shartaasi si wadajir ah si loo suurageliyo nabad-gelyo , horumar iyo barwaaqo.